သက်တန့်ချို: ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ သတ္တ၀ါကောင်
ရုရှားပြည်နဲ့ မြို့တော် Chelyabinsk မှာ ဒီထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီသတ္တ၀ါ ကောင်ကို နာမည်ပေးဖို့တောင် ခက်ခဲလှပါတယ် ။ မြွေလိုလို ကင်းလိုလို နဲ့ ကျောပေါ်မှာလည်း အခွံမာကြီး ပါပါသေးတယ် ။ ဒီသတ္တ၀ါကောင်ကို လက်ပေါ်တင်ပြီး ကြည့်ဖို့ဆိုတာ အတော့်ကို အူယားစရာကောင်းလှပါတယ် ။ အဆိပ်ရှိပုံရပြီး စစတွေ့ခြင်း ဒေသခံတွေက သတ္တ၀ါ နားကို မကပ်ရဲကြပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်က မြွေတွေ လို ပါးပြင်းထောင်ပြီး ရန်မူရဟန်ရှိတာကြောင့် လောလောဆယ် ထိမ်းသိမ်းထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 9:13 AM
ကာရံဆူး June 3, 2010 at 10:00 AM
ကြောက်စရာကြီးနော်...ရုရှားက ဘာလို့ ထူးဆန်းတဲ့ ကောင်တွေ ခဏခဏတွေ့ လဲ မသိဘူးနော်...စိတ်ဝင်စားစရာတော့ ကောင်းသားပဲ...
မောင်ဘကြိုင် June 3, 2010 at 11:44 AM
Anonymous June 3, 2010 at 10:20 PM
This is notastrange creature. This is fake.. and I am sure that the original source has used photoshop. The photo taken is not clear even it's notamoving (dead) thing. The head part is exactlya"horseshoe crab's" and the tail part the snake's.
or could be the hind part ofafish.
FYI : http://www.google.com.sg/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=horseshoe+crab
naingnaing February 17, 2012 at 10:23 PM
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရှိပါတယ် ဟိုးအရင် ကျွန်တော် မုံရွာကနေ အလောင်းတော်ကသပ ကိုသွားတုန်းကလား မသိဘူး ရေကန်ထဲကနေ ကြာပန်းတွေခူးတော့ ပါလာတာ တွေ့ဖူးတယ်